Ungabhalisa njani kwi-RSS feed kwaye yintoni i-RSS feed | Iindaba zeGajethi
HNdiqala kwi ifidi Ye-Assassin Vinegar. Uthetha njani? Yintoni ukutya? Yinto yokondla i-RSS leyo? Ewe, ukuba unawo onke la mathandabuzo kwaye awunalo nofifi lokuba yeyiphi ifidi okanye yeyantoni uyakuba unethamsanqa kuba namhlanje uthatha ithuba lenkulumbuso Ukutya ukutya kweviniga Ndiza kuchaza ukuba yintoni le feed, ukuba yenzelwe ntoni kwaye uyisebenzisa njani.
Yintoni ukondla nge-RSS?
Ngokobuchwephesha, ifidi yeRSS Yifayile ye-RSS ebhalwe kwiXML equlathe ulwazi olunxulumene neendaba, amanqaku kunye nezimvo ezipapashwe kwiphepha lewebhu.
NgobuKristu ungathi ukondla nge-RSS luxwebhu okulo kubandakanya ulwazi lwewebhusayithi kodwa ukuhlela olu lwazi ngendlela engqongqo (esesikweni) ukuze ikwazi ukufundwa ngumfundi wesondlo.
BEwe ngoku okwangoku usenokungazi ukuba yeyiphi ifidi kwaye ngaphezulu koko ndongeze amagama amatsha ongeke wazi njenge-RSS kunye neXML. Sukuba nexhala, makhe sibone ukuba yeyiphi ifidi kwaye mhlawumbi oku kuyakucacisa izinto kancinci.
Ifayile ye-RSS, okanye Ukutya kwe-RSS kusebenza ukuba umsebenzisi angakwazi hlala unolwazi Uhlengahlengiso olwenziwe kwiphepha lewebhu. Ngale ndlela akuyomfuneko ukutyelela iwebhusayithi ukuze ufumanise ukuba amanqaku amatsha okanye izimvo zamva nje zongeziwe.
PKubonakala ngathi ngoku icace gca, akunjalo? Xa umntu enomdla kumanqaku apapashiweyo, umzekelo kwibhlog, kodwa angafuni ukutyelela ibhlog yonke imihla ukubona ukuba kukho amanqaku amatsha, into ayenzayo loo mntu Rhuma ukondla Ukusuka kuloo bhlog. Ngale ndlela kwaye usebenzisa feed feed Loo mntu uya kuba nakho ukuhlala enolwazi ngazo zonke iindaba ezipapashwa kumaphepha ewebhu abhaliselwe kuwo.
SNdicinga ukuba kufanele ukuba sele uyazi ukuba yeyiphi ifidi kwaye yenzelwe ntoni, ke ngoku kuya kubanomdla ukuyazi ukuba urhumele njaniOko kukuthi, ukubhalisa, kwiifidi onomdla kuzo kunye nenkqubo oza kuyisebenzisela yona ukwazi ukufunda ukutya ubhalise kuyo.
-Uyifunda njani i-RSS feed -
PUkuze ukwazi ukufunda ukutya unokukhetha ezimbini. Unokukhetha phakathi kwezi zimbini okanye uzisebenzise kunye ngokokhetho lwakho:
- Ukhetho A: Faka inkqubo yokufunda ukutya kwikhompyuter yakho.
- Ukhetho B: Sebenzisa i-intanethi feed feed, ukuze ungazukufaka nantoni na kwaye ungafikelela kwiifidi zakho nakweyiphi na ikhompyuter ngonxibelelwano lwe-Intanethi.
Kungekudala ndiza kudibanisa apha ukusuka kwizifundo ezimbalwa apho ungabona khona ukuba ungasisebenzisa njani isifundi sokutya ngokufaka okanye nge-Intanethi.
-Ubhalisa njani kwi-RSS feed -
ANgoku siza kubona ukuba uyirhumela njani ifidi kwaye siza kusebenzisa Ukutya ukutya kweviniga njengomzekelo wokubonisa inkqubo yokubhalisela ibhlog okanye nayiphi na iwebhusayithi evumela oko.
SUkuthatha ukuba sele simfakile umfundi wokutya okanye sibhalisile kunye nomfundi wesibonelelo esikwi-intanethi, into elandelayo ekufuneka yenziwe kukufumana indawo yebhlog apho iqhosha lokubhalisela ukutya. Olu khetho lunokwahluka kwibhlog ukuya kwibhlog, kodwa ihlala iyimpawu enemibala enemibala eorenji okanye uphawu oluncinci olunonobumba i-RSS, i-ATOM okanye iXML.
CNjengoko ubona kumfanekiso ongaphambili, zininzi ii-icon ezimele ukondliwa kwephepha. Xa uqhele ezi icon, uya kuyazi indlela yokuqonda nayiphi na umahluko oyifumana kwiwebhusayithi. Umzekelo i icon ye Killer yeviniga ibomvu ligazi hayi iorenji, kodwa iyabonakala ngokulula njenge icon yokubhalisela ukutya.
UNje ukuba sifumane iqhosha lokuthenga kufuneka sicofe kulo kwaye emva koko sixhomekeke kuhlobo lokudityaniswa olubekwe kwibhlog, ubhaliso luya kwenziwa ngokuzenzekelayo okanye iwindow ivuleke apho kuya kufuneka sikhethe umfundi wesondlo ukuba sifuna ukusebenzisa. Kule meko, emva kokucinezela iqhosha, iwindow yokubhaliselwa ye FeedBurner, eyinkonzo yokupapasha ukutya endikhethileyo VinagreAssino.com. Ifestile evulayo yile ilandelayo:
En kule festile kuya kufuneka ukhethe umfundi wakho wokutya ngokucofa kwi icon ehambelana nayo (kumfanekiso ongaphakathi kwebhokisi ebomvu). Ukuba umfundi wakho wesondlo akabonakali, cofa kwitolo ukuze ubone abanye abafundi kwaye ukhethe eyakho. Ndisebenzisa iiBloglines kwaye kungekudala ndiza kwenza isifundo ekusetyenzisweni kwayo. Ukuba umfundi wakho wesondlo akabonakali okanye awufuni ukusebenzisa nayiphi na into, unokhetho lokufumana iindaba ezivela kwiblogi ngeposi ngokuchofoza kwi-icon yeemvulophu yeposi ebonakalayo kwiWindowsBurner iwindow (ejikelezwe ngesangqa esibomvu umfanekiso).
POkokugqibela, kunye nokulandela okuvakalisiweyo kulo mhlathi wokugqibela, kukho iinkonzo zokupapasha ukutya ezivumela, njengoko ubonile, ukufumana iindaba ngeposi, ngale ndlela awuzukufakela okanye usebenzise nawuphi na umfundi wesondlo, Inkqubo yakho ye-imeyile nje. Ngasentla sele ubone indlela yokubhalisa ngeposi evela kwi-FeedBurner, nawe unolu khetho lufumanekayo kwi VinagreAssino.com ukubhala i-imeyile yakho ebaleni ebonakala ecaleni komqondiso wobhaliso (ekunene phezulu) kwaye ucofe kwiqhosha "Thumela".
ENdiyathemba ukuba ukusukela ngoku awuyi kuphoswa naliphi na inqaku endilipapashayo kwibhlog kwaye ubhalisele ukutya. Ndiza kuqala nge iincwadana zokufaka kunye nokusebenzisa abafundi bakho obathandayo bokutya kodwa okwangoku fumana imibuliso, njengesiqhelo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » software » Ungabhalisa njani kwi-RSS feed kwaye yintoni i-RSS feed
Ndiyithandile ingcaciso yakho, kwaye ngoku ndithi, ungandivumela ukuba ndiyidibanise nebhlog yam? Ndifuna ukucacisa ngokufutshane ukuba abantu mabenze ntoni ukuze babhalise, kwaye ndicinga ukuba le yingcaciso egqibeleleyo njengoko injalo
Siyavuyisana nesiza, ndiyayithanda. Imibuliso evela (phantse) kugqatso lomdyarho.
UAlice ndonwabile ukuba uyayithanda kwaye unganxibelelana nayo kwibhlog yakho. Logama nje unika izingqinisiso ukusuka apho usebenzisa khona into oyithumelayo ngekhe ubenangxaki ngayo nayiphi na ibhlog (ukuba usebenzisa iphepha-mvume eliyivumelayo). Gcina ukhumbula ukuba amakhonkco aluncedo kakhulu. Ndiyabulisa kwaye ndiyabulela.
Mholo!!! namhlanje ndifundile ukuba kukutya, yingcaciso elungileyo..bulela nje ngokuvumela abantu abaninzi ukuba bafunde kule nto, kungekudala ndiza kuthabatha ibhlog yakho kwaye ndikushiyele ikhonkco ukuze ndikwazi ukubhalisela zombini ibhlog yethu, eyam i-ahun isakhiwa ... Ndiyabulisa! kwaye ndiyabulela kakhulu.
Enkosi ngengcaciso yakho, kuyacaca ukuba amanzi akanakubakho, kwaye ndifunde izinto ezininzi kwibhlog yakho. ngokubhekisele
Inkcazo yakho intle kakhulu, ngoku ndicacile malunga nalo mbandela.I-1000 enkosi
UNicolas Vera sitsho
Siyavuyisana nengcaciso yenu…. kumxholo osandula ukuthandabuza ... Enkosi
Phendula kuNicolas Vera
Ndiyithandile ibhlog yakho, ungandichazela ukuba ndingazisa njani uhlaziyo lwam lwebhlog nge-imeyile? Enkosi kakhulu
U-Enrique uvula iakhawunti kwi-feedburner kwaye akhethe iposi ngokhetho lweposi, simahla.
Molo, ungafumanisa ukuba ngubani obhalisele i-RSS yethu? Enkosi ngokuphendula. Ingcaciso yakho ukuza kuthi ga apha yayiyeyona icacileyo endinokuyifumana. Ndiyabulela
Molo ... Ndifuna ukukuxelela ukuba njengabanye endibathandileyo ingcaciso yakho, ndiyaqala nje ndenza iblogi yam yoncedo lobuchwephesha ndiphakathi kwinqanaba lomsebenzi weenkqubo kodwa kodwa ezi zinto malunga namaphepha ewebhu kunye nezinye khange ndifundiswe yilento ndiqala ngayo kwaye ndingathanda nokudibanisa ibhlog yakho neyam, ndiyifumana ilungile kwaye kulungile apho ndinophawu lokutya lweorenji kwaye ndingathanda ukuyivula, ndicofa kwaye ithi ukuba icinyiwe kwaye inje into enje ukuba unokwenza isandla sakho ukusukela ngoku ndiyabulela kwaye uqhubeke ... enkosi
ULuis Alberto sitsho
Ndiyaluxabisa kakhulu uncedo lwakho kuba lundincede kakhulu ndiyathemba ukuba ndingazenzela ukutya kwam kwaye ndibeke eyakho kwiwebhusayithi yam
Phendula uLuis Alberto
Iindawo zokuncedisa uSergio izixhobo zombane sitsho
Ndiyithandile inkcazo yakho kuba bendibhidekile nomxholo, ngoku ndiza kuzama ukukhuphela i-RSS FEED yewebhusayithi yam, ndiyavuyisana kakhulu xa ndinikwe inkcazo.
Phendula kwiindawo zeSergio-Spare zombane
Ingeniso kaWilmer kunye naMalungu sitsho
Ulunge kakhulu xa uchaza, ndiyayithanda into ebendiyifuna malunga ne-RSS FEED, ngoku ndiyayiqonda ngcono umsebenzi wakho we-RSS, enkosi kuwe.
Phendula kwiNgeniso yokuDibana neWilmer
Ndizama ukubeka i-rss feed kwibhlog yam, kwaye ndifunda iphepha lakho, undincede kakhulu, kuba ngamanye amaxesha uyaphazamisa ukufunda izinto eziliwaka kwaye uphele uphambene!
Ndiza kuqhubeka ndifunda iphepha lakho ndilinde ulwazi oluthe kratya malunga nesihloko.
UHerman Ferreyra sitsho
iposti entle kakhulu kodwa ndinengxaki emfanekisweni apho umfundi ekhetha iqhosha elijikelezileyo lingabonakali kum, kutheni isenzeka?
Ndingathanda ukwazi ukuba kutheni le nto isenzeka kum kuba ukuba andiyisombululi, ababhalisile banokuhamba ngaphandle kokubhalisa
Kuya kuba luncedo olukhulu ukuba undixelele okwenzekayo, enkosi kakhulu!
Phendula Herman Ferreyra
Inkcazo egqwesileyo nefundisayo eye yandinceda kakhulu njengo "mfundi weBlogger" nalapho ndizivumele ngokwabelana ngayo nebhlog yam. Ndibanguye kwaye ke ndivakalisa umlandeli wakho othembekileyo ukusukela ngoku. Enkosi ngokwabelana ngolwazi lwakho kunye namava. Impumelelo ezininzi. Namaste.